केकीलाई फकाउँदै अमिर,मङ्सिरमा सार्वजनिक हुने तयारी (लौ हेर्नुहोस् भिडियोसहित) – NamoBuddha Khabar
केकीलाई फकाउँदै अमिर,मङ्सिरमा सार्वजनिक हुने तयारी (लौ हेर्नुहोस् भिडियोसहित)
शनिबार, कार्तिक ०९, २०७६ | १९:२३:५० |
काठमाडौं–तामाङ चलचित्रको पर्दामा केटि पट्ट्याउन माहिर चकलेटि नायक हुन् अमिर दोङ । फाईट⁄एक्सन देखाएरै भएपनि मन जितेरै छाड्ने यि नायक अचेल नेपाली चलचित्रकी सुन्दरी नायिका केकी अधिकारीसँगै भेटिन थालेका छन् ।
चलचित्रमार्फत युवा पुस्तालाई तामाङ सांस्कृतिक जागरण उठाउँदै हिड्ने यि नायक दोङ अन्तरजातिय समुदायकी युवतीको पिछा किन गर्दैछन् ? डाँडाकाँडा,कुनाकन्दराहरुमा सेलो गाउँदै हिड्ने अमिरले केकीको मायामा के साँच्चै ‘मैच्याङ’ को आकृति भट्टाएका हुन् ? यत्तिबेला यो चर्चा निकै चल्न थालेको छ,वास्तवमा यो रियलमा भन्दा रिल लाइफको प्रसंग हो ।
स्वयम् अमिर दोङद्धारा निर्देशित नेपाली कथालनक चलचित्र ‘सूर्य किरण’ मा यि दुई युवायुवती जोडिको रुपमा देखिने भएका हुन् । द्वन्द निर्देशक राजु तामाङले यो चलचित्रमा गुण्डा थर्काउने,मार पिट गर्ने भन्दा उनलाई प्रेमील युवामै सहज बनाएका छन्,त्यसैले डम्फू बजाउँदै केकिलाई फकाउन मस्त देखिएका हुन् अमिर ।
शुक्रबार राजधानीमा पत्रकारहरुमाझ ‘मैच्याङलाई’ गीत तथा ट्रेलर सार्वजनिक गर्दै निर्माण टोलीले यो जानकारी गराएको छकि यो जोडि मङ्सिरको २० गते सार्वजनिक हुदैछ । यसरी चलचित्रको रिलिज डेट टुंगो लागेसँगै अन्तरजातिय जोडीको भुमिगत प्रेम सार्वजनिक हुने भएको हो,सायद कथाले मागेपछि ।
चलचित्रमा अतिथि कलकारको रुपमा दोङ र केकीको जोडीका साथै नेपाली चलचित्रका चल्तिका नायक सविन श्रेष्ठ,मेलिना प्रजा लगायतका कलाकारहरुको शसक्त अभिनय रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईयो ।
यसअघि अति सिमान्तकृत एवम् अल्पसंख्यक चेपाङ समुदायको मौलिक सांस्कृतिक गीतहरुको म्युजिक भिडियोहरु निर्माणको अनुभव संगालेका नायक तथा निर्देशक दोङले पहिलो पटकनै यिनै चेपाङ समुदायबाट निर्माण गरिएको नेपाली चलचित्रमा आफ्नो खुबी देखाउने भएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा अमिरको नेपाली चलचित्र यात्रा सफलताको शुभकामना व्यक्त गरियो । यसक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृत सुनुवारले अमिरको चलचित्र यात्रा फराकिलो बन्नुका साथै नेपाली चलचित्र जगतमा पनि सफलता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नायक अमिरले दशकौं लामो आफ्नो कलाकारिता अनुभव नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पनि प्रयोग गरेर हेर्न चाहेको र दर्शकको माया पाउने अपेक्षा गरे। उनले दर्जनौं चलचित्र निर्देशनका साथै मुख्य पात्रहरुमा अभिनय गरिसकेका छन् ।
डम्फु मिडिया हाउस प्रालिको व्यानरमार्फत आउने चलचित्रमा समावेश गरिएका गीत मध्ये शिर्ष गीत ‘खै के भन्छ’ भने हाईलाईट्स नेपालकोे युट्युव च्यानलमार्फत यसअघिनै सार्वजनिक भईसकेको छ , जसमा चाहना लामाको शब्द रहेको छ भने जोगलाल लामाको संगीत तथा सन्तोष लामा र दिपा लामाको स्वर छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको यो गीत ‘मैच्याङलाई’ सेलो शैलीमा तयार पारिएको छ । जहाँ केकी अधिकारीलाई तामाङनीको भेषमा कम्मर मर्काउने कोरियोग्राफर हुन् अजय स्याङतान ।
गायिका जितु लोप्चान र विशाल काल्तानको स्वर रहेको यस गीतमा शब्द र संगीत गायक स्वयम्कै रहेको छ । ऋतुराज पाख्रिनको कथा तथा पटकथा रहेको चलचित्रलाई विक्रम लामा र अभिषेक माझीले खिचेका हुन् ।